Olana amin'ny rakitra PSGB 2GB. Olana rakitra PST be loatra.
Home Products DataNumen Outlook Repair Olana fisie PST be loatra (ny haben'ny rakitra PST dia mahatratra na mihoatra ny fetra 2GB).
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny olan'ny rakitra PST be loatra
Inona no olan'ny rakitra PST be loatra?
Microsoft Outlook 2002 sy ny kinova taloha dia mametra ny haben'ny rakitra Personal Folders (PST) ho 2GB. Isaky ny mahatratra na mihoatra an'io fetra io ny rakitra PST dia tsy ho afaka hanokatra na hampiditra azy intsony ianao, na tsy afaka manampy data vaovao ao aminy. Ity dia antsoina hoe olan'ny rakitra PST be loatra.
Outlook dia tsy manana fomba namboarina hamonjy ilay rakitra PST be loatra izay tsy azo idirana. Na izany aza, Microsoft dia manome pst2gb fitaovana ivelany ho toy ny vonjimaika, izay afaka mamerina amin'ny laoniny ny rakitra amin'ny toe-javatra azo ampiasaina. Fa amin'ny tranga sasany, ity fitaovana ity dia tsy hahomby amin'ny famerenana amin'ny laoniny ireo rakitra be loatra. Ary na dia mahomby aza ny famerenana amin'ny laoniny, dia hokapaina ny angona sasany ary lost maharitra.
Microsoft koa dia namoaka fonosana serivisy maromaro ka rehefa manakaiky ny fetra 2GB ny rakitra PST dia tsy afaka manampy data vaovao aminy ny Outlook. Ity rafitra ity, amin'ny lafiny iray, dia afaka manakana ny fisie PST tsy ho be loatra. Saingy rehefa tratra ny fetra, dia zara raha azonao atao ny manao ny asa rehetra, toy ny mandefa / mandray mailaka, manoratra, mametraka fotoana, sns, raha tsy hoe esorinao ny rakitra marobe ao amin'ny rakitra PST sy mitambatra aorian'izany dia ahena ny habeny. Tena tsy mampahazo aina izany rehefa mihalehibe sy mihalehibe ny angona Outlook.
Hatramin'ny Microsoft Outlook 2003 dia misy endrika fisie PST vaovao ampiasaina, izay manohana ny Unicode ary tsy manana ny fetra habe 2GB intsony. Noho izany, raha mampiasa Microsoft Outlook 2003 na 2007 ianao, ary ny rakitra PST dia noforonina tamin'ny endrika Unicode vaovao, dia tsy mila manahy momba ny olana mihabe loatra intsony ianao.
1. Rehefa manandrana mampiditra na miditra amin'ny fisie Outlook PST be loatra ianao dia hahita hafatra diso, toy ny:
Hita ny lesoka tao amin'ilay rakitra xxxx.pst. Alao ny rindranasa alefa mailaka rehetra, ary avy eo ampiasao ny Inbox Repair Tool.
izay 'xxxx.pst' no anaran'ny fisie Outlook PST hapetraka na ho azo idirana.
2. Rehefa manandrana manampy hafatra na entana vaovao ao amin'ny fisie PST ianao, ary mandritra ny fizotran'ny fanampiana dia mahatratra na mihoatra ny 2GB ny rakitra PST dia ho hitanao fa mandà tsy handray data vaovao fotsiny i Outlook raha tsy misy fitarainana, na ho hitanao hafatra diso, toy ny:
Tsy azo nampidirina tao amin'ilay fampirimana ilay rakitra. Tsy vita ny hetsika.
Task 'Microsoft Exchange Server - Fahazoana tatitra diso' (0x8004060C): 'Error tsy fantatra 0x8004060C'
Nahatratra ny habeany lehibe indrindra ny rakitra xxxx.pst. Raha te hampihena ny habetsaky ny angon-drakitra ato amin'ity rakitra ity dia safidio ny entana sasany izay tsy ilainao intsony, avy eo (esory + del) fafao izany.
Tsy afaka maka tahaka ilay entana.
Araka ny voalaza etsy ambony, Microsoft dia tsy manana fomba iray hamaha ny olan'ny rakitra PST be loatra. Ny vahaolana tsara indrindra dia ny vokatray DataNumen Outlook Repair. Izy io dia afaka mamerina ilay rakitra PST be loatra nefa tsy misy fatiantoka angona. Mba hanaovana izany dia misy fomba roa hafa:
Raha manana Outlook 2003 na kinova ambonimbony napetraka ao amin'ny solosainao ianao dia azonao atao izany avadiho ilay rakitra PST be loatra ho lasa format unicode Outlook 2003 vaovao, izay tsy manana fetra 2GB. Ity no fomba tiany.
Raha tsy manana Outlook 2003 na kinova ambonimbony kokoa ianao dia azonao atao izany zarao amin'ny fisie maromaro kokoa ilay rakitra PST be loatra. Ny rakitra tsirairay dia misy ampahany amin'ny angon-drakitra ao amin'ilay fisie PST tany am-boalohany, saingy latsaky ny 2GB izany ary tsy miankina amin'ny hafa mba hahafahanao miditra an-tsokosoko amin'ny Outlook 2002 na ny dikan-teny ambany tsy misy olana. Ity fomba ity dia somary manelingelina ihany satria mila mitantana rakitra PST marobe aorian'ny fiasan'ny fisarahana.